कागेश्वरीमा विश्वकै ठूलो पञ्चरत्न धातुले बनेको कागको मूर्ति बन्दै – ईमेची डटकम
कागेश्वरीमा विश्वकै ठूलो पञ्चरत्न धातुले बनेको कागको मूर्ति बन्दै
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा दुई हजार किलोको विश्वकै ठूलो पञ्चरत्न धातुले बनेको कागको मूर्ति निर्माण गरिने भएको छ। नगरपालिकाको लोकतान्त्रिक शहीद पार्कमा आगामी फागुन ७ गते मनाइने कागेश्वरी महोत्सवमा उक्त पञ्चरत्न धातुको काग राखिने भएको हो। आज एक मलेसियन नागरिकले नगरपालिका–१ गागलमा विश्वकै ठूलो काग निर्माणका लागि पञ्चरत्न जडित बाला र डा. राम उप्रेतीले तामाको गाग्री काग निर्माणका लागि नगरपालिकालाई प्रदान गरेका छन्।
नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापामार्फत वडा नं। १ का वडाध्यक्ष मुकुन्द गजुरेलले मलेसियन नागरिक र डा. उप्रेतीलाई काग निर्माण गर्ने पवित्र कार्यका लागि प्रदान गरिएको बाला र तामाको गाग्री प्रदान गरिएकोमा सराहना गरेका छन्। उनले भने– ‘यस अभियानमा लागौं र हामी सँगसँगै अगाडि बढौं।’ नगरपालिकाका प्रमुख थापाले नगरपालिकाले विश्वकै ठूलो दुई हजार किलोको काग निर्माण गरेर इतिहास रच्न लागेको बताएका छन्।
तथ्यांकअनुसार इन्डोनेसियामा एक हजार चार सय किलोको धातुको काग निर्माण भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नै कागेश्वरी मन्दिरमा २ सय २७ किलोको काग यसअघि नै निर्माण गरिसकेको छ। नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको केन्द्र निर्माण गर्नका लागि नगरपालिकाले पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने विभिन्न कार्य गर्ने योजना बनाएको छ। यो खबर नेपालसमचार पत्रमा छ ।